Aya ndiwo mashandiro eboka idzva reFaceTime rinoshanda muIOS 12 | IPhone nhau
Aya ndiwo mashandiro eboka idzva reFaceTime rinoshanda muIOS 12
ari chii chitsva muIOS 12 vakaonekwa en bloc payakaburitswa zviri pamutemo neimwe bakoat. Apple yakadzokorora chitsva chine chekuita neFaceTime mune yekupedzisira vhezheni, asi pakupedzisira yakachiisa mune iyo iOS 12.1 yekuvandudza. Ndezve iyo Boka FaceTime kufona iyo yatinogona nayo kuita vhidhiyo kufona inosvika makumi matatu nemaviri vanhu.
Muchikamu chino tinokudzidzisa maitiro ekuita gadzira mapoka ekufona nenzira iri nyore uye isu tinokuudza zvese hunhu hwechiitiko icho vazhinji venyu chamushandise kwete kungonakidzwa chete munguva yenyu yemahara muchiona mhuri kana shamwari, asiwo kuti munogona kushanda nekutenda kuchishandiso ichi chitsva.
1 Ngatidzokereizve… Mafoni eboka anobva kupi?
2 Maitiro ekugadzira iro boka vhidhiyo kufona paFaceTime
Ngatidzokereizve… Mafoni eboka anobva kupi?
Apple yakaunza iOS 12 paWWDC 2018 munaJune gore rino. Ichi chaive chimwe chezvinhu zvitsva zvaifadza vese vaipinda nevashandisi vatakazodzidza nezvazvo. Iyo ficha yakakubvumidza iwe kuti ugadzire boka vhidhiyo mafoni anosvika 32 vanhu vanoshandisa FaceTime. Mubvunzo wakamuka ndewokuti zviso zvakasiyana zvaizorongwa sei pachiratidziro kuitira kuti isarasikirwe nerudzi rupi nerupi ruzivo.
Zvakanaka ipapo. Zvichava zvine musoro kuti mukutaurirana kwevanhu makumi matatu nevaviri pane kurongeka kwemazwi kana kuti pamwe havazi vanhu vazhinji vanotaura panguva imwe chete. iOS 32 inoongorora ari kutaura uye anoratidzwa pachiratidziri, achivanza avo vasiri kupindira panguva iyoyo. Iyo iOS 12 mabheji Vakaratidza kushanda uye kwakashanda chaizvo. Kunyange zvakadaro, Apple yakabvisa chishandiso mune yekupedzisira vhezheni yeIOS 12, uye akavimbisa kuti yaizoisanganisira muIOS 12.1. Saka zvaive zvakadaro.
Maitiro ekugadzira iro boka vhidhiyo kufona paFaceTime
Zviri nyore kwazvo. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti une iOS 12.1 pane yako kifaa. Iwe unogona chete kungoita mafoni efoni uye vhidhiyo kufona kune avo vashandisi vane zvakare yavo kifaa kuvandudzwa kune iyo vhezheni. Kana kiyi iyi yave yakasimbiswa, iwe uchafanirwa kupinda muFaceTime app uye tinya iyo yekuwedzera iri kumusoro kwepamusoro.
Tevere, uchafanirwa kusarudza kuvanhu vese vaunoda kuwedzera pakufona. FaceTime inoratidza mubhuruu avo vashandisi vane iOS 12.1 yakaiswa, saka kufona kweboka kunogona kuitwa. Paunenge uchinge wasarudza vese vashandisi vaunoda kuwedzera kune iyo kufona (chenjera, ine vanosvika makumi matatu nevashandisi), unogona kusarudza kana iwe uchida kufonera vhidhiyo kana izwi rekufona.
Ukangotanga kufona, iko kufona kunotanga uye kana vangobvuma kufona, vanobva vatanga kuoneka pachiratidziri. Vaya vashandisi vanotaura, kana iri vhidhiyo yekufona, ichaonekwa pachiratidziri, zvimwe zvese zvichavanzwa. Panyaya yeiyo iPad, ivo vanozokwana akawanda anodhura kupfuura iyo iPhone, hongu.
Zvakare, kana iko kufona kwapera, boka richangoburwa richave rakagadzirwa mune yako FaceTime app. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukabaya padziri paunenge wapedza, kufona nyowani kunotanga pasina kukosha kwekuwedzera vashandisi mumwe nemumwe sezvawaimboita kare. Uye zvakare, kana iko kufona kwatanga, iwe unozogona kushandisa akasiyana mhedzisiro ayo akaitwa kuti awanikwe kune mushandisi muMessage app, kumutsidzira iyo vhidhiyo kufona kuitira kana iri yakanyanya kusununguka mamiriro.
Sechido, kana uine boka revanhu vanopfuura vaviri muMessage, unogona kutanga izwi rekufona kana vhidhiyo kufona nekungodzvanya pane iyo «kufona» kana «vhidhiyo kufona» bhatani. Kana iwe uchida kuwedzera munhu mutsva kufona, zvese zvaunofanirwa kuita tinya pamatombo matatu anowanikwa mukufona kumusoro kurudyi, uye tinya pa "Wedzera munhu".
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Aya ndiwo mashandiro eboka idzva reFaceTime rinoshanda muIOS 12
Basa reECG rave padyo, rinozoitwa muwatchOS 5.1.2
Apple inomira kusaina iOS 12.0.1, saka tinogona chete kuisa iOS 12.1